नेपालमा पछिल्लो समयमा प्राविधिक शिक्षा प्रतिको आकर्षण बढ्दै गईरहेको छ । नेपाली शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको बेथिति र भड्किलो शिक्षा प्रणालीका कारण धैरै विधार्थीहरु अहिले उच्च शिक्षा हासिलको लागि विभिन्न देशहरुमा भौतारिने गरेको तथ्यांक पनि हाम्रासामु प्रष्टै छ ।
आफ्नो सुझबुझविना तपाई परिवारको दबाबमा परी प्राविधिक शिक्षा पढ्दै हुनुहुन्छ भने सम्झनुस् यो तपाईले ठूलो भूल गर्दै हुनुहुन्छ । यदि तपाई परिवारको दबाबमा प्राविधिक शिक्षा रोज्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले धैरै चुनौतिको सामाना गर्नुपर्ने हुन्छ किनकि यो प्राविधिक शिक्षा सुनेको जस्तो सजिलो छैन । यदि प्राविधिक शिक्षा पढ्ने शोख भित्रदेखिको नै हो म जसरी पनि यो विषयमा सफल भएरै छोड्छु भन्ने इच्छाशक्ति तपाईसँग छ भने त्यो असम्भव पनि छैन तपाई अवस्य सफल हुन सक्नुहुन्छ । त्यो सबै तपाईको इच्छाशक्ति र मेहनतमा भर पर्नेछ ।
यस्ता धैरै कलेजहरु छन जसले विधार्थी भर्नाको समयमा धैरै सुविधाहरु छन् भनेर धैरै झुठा मन्त्रहरु लगाएर विधार्थीहरु तान्ने गरिहेका छन । कुनै पनि कलेजले भर्नाको समयमा देखाएका आश्वासन पुरा गर्न सक्दैनन् र उनीहरुले भने अनुसारको सुविधा त्यहाँ हुदैन । ती सबै विद्यार्थी तान्ने खेलमात्र हुन् ।
त्यसैले यसमा पनि ध्यान दिनुपर्ने धेरै कुराहरु छन् । अहिले प्राविधिक शिक्षा क्षेत्रमा पनि धैरै अनियमितता हुन थालेका छन । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसाहिक तालिम परिषद्ले दिने विधार्थी सहुलियतमा चरम अनियमितता छ ।
विधार्थीलाई दिने सहुलियतमा पनि राजनितिक दबाब र भागबन्डा हाबी हुँदा पाउनुपर्नेले सहुलियत पनि धेरैले पाउने गरेका छैनन् भने पाउने गरेका सहुलियतहरु पनि कर्मचारीतन्त्र हावी हुँदा कर्मचारीका आफन्त र राजनीतिक दलका आसेपासेले पाउने गरेका छन ।
त्यस्तै अर्को तिर प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसाहिक तालिम परिषद्ले कलेजलाई विद्यार्थीका लागि दिने गरेको आर्थिक सहुलियतमा पनि चरम अनियमितता हुने गरेको छ । यहाँ पनि स्पष्ट रुपमा आफुखुसीतन्त्र र आफन्ततन्त्र चलेको देखिन्छ ।
प्राविधिक शिक्षाको एउटा हिंसा प्रयोगशालाको अवस्था अन्य शैक्षिका संस्थाको भन्दा सुविधाजनक देखिएपनि गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षाको लागि भने यो पर्याप्त छैन । कुनै कलेजहरुको प्रयोगशालाहरुको अवस्था पनि प्राविधिक शिक्षाको तुलना गरेर हेर्दा नाजुक नै देखिन्छन् । विशेष मापदण्ड बनाएर यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ भने शिक्षण विधिमा पनि केहि परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
त्यसैगरी, परीक्षा आधारित भन्दा पनि प्राविधिक शिक्षालाई प्रयोगात्मक र व्यवहारिकता तर्फ उन्मुख गर्नुपर्छ । कलेजलाई बुझाउने अतिरिक्त शुल्क अनुसारको सेवा सुविधाहरु पनि विधार्थीलाई केहि कलेजहरुले दिने गरेको भए पनि अधिकांश कलेजहरुले उपलब्ध गराउने गरेका छैनन् ।
यसमा कलेजहरुले विद्यार्थीलाई अतिरिक्त शुल्क अनुसारको सेवा शुल्क उपलब्ध गराउनु पर्ने देखिन्छ र विद्यार्थी पनि यसतर्फ सचेत रहि आवाज उठाउनुपर्ने देखिन्छ । पछिल्लो समयमा एस एल सी र एस ई ई उत्तीर्ण जुनसुकै विधार्थीको मुखमा प्राविधिक शिक्षा नै झुन्डिएको छ ।
रोबोट कसरी सुरु भयो ? यस्ताे छ राेचक इतिहास
स्मार्ट सिटीका लागि यी महत्वपूर्ण पाँच आधार
ब्लकचेन यति शक्तिशाली किन ?
कसले गर्यो विश्वमा पहिलो पटक मोबाइल फोनबाट कुराकानी ? यस्तो छ इतिहास